Horudhac: Real Madrid vs Getafe… (Los Blancos oo caawa doonaysa inay afar dhibcood hoggaanka horyaalka La Liga kaga qabato Barca) – Gool FM
(Madrid) 02 Luuliyo 2020. Real Madrid ayaa caawa soo dhoweynaysa naadiga Getafe, waxaana guul ay gaarto Los Blancos ay ku hoggaamin doontaa inay afar dhibcood hoggaanka horyaalka La Liga kaga qabto Barcelona.
Dhinaca kale Getafe ayaa u safreysa garoonka Alfredo Di Stefano si ay u sii dheereysato rikoorkeeda guuldarro la’aanta ee afar kulan iyagoo kulankoodii ugu dambeeyey guul ka soo gaartay Real Sociedad.
Taariikhda: Khamiis 02 Luuliyo 2020
Ferland Mendy ayaa la filayaa inuu ku soo bilowdo daafaca garabka bidix ee kooxda martida loo yahay, isagoo Valdebebas ka bedeli doona Marcelo.
Vinicius Jr ayaa sii joogteyn doona booskiisa weerarka kaddib bandhig isku mid ah oo uu dhowaan soo bandhigay, waxaana uu Eden Hazard ka caawin doonaa weerarka.
Zinedine Zidane ayaa la filayaa inuu raaco dooqiisa koowaad ee safka hore, inkastoo kaliya maalmo yar oo nasasho ah uu qaatay ka hor kulankii Athletic Club.
Djene ayaa ganaax uga soo laabanaya kooxda martida ah, waxaana uu ka soo muuqan karaa dhaafaca naadiga Getafe.
Peter Etebo ayaa ku soo bilaaban kara garabka midig.
Jorge Molina ayaa la filayaa inuu ku soo laabto safka hore ee Jose Bordalas kulanka caawa, waxaana uu ka garab ciyaari doonaa Jaime Mata.
>- Real Madrid ayaa guuleysatay tobankeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda kula ciyaartay Getafe tartammada oo dhan.
>- Kooxda Real Madrid ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool 10-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Getafe dhammaan tartammada.
>- Real Madrid ayaan wax guuldarro ah la kulmin 16-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay kulammada horyaalka La Liga.
>- Kooxda Real Madrid ayaan shabaqeeda gool ka ilaashan saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay Getafe tartammada oo dhan.
>- Los Blancos ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay gurigeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.